Madaxweynihii hore ee Puntland Gen.Cadde Muuse Xirsi oo gaaray Gaalkacyo
Gaalkacyo:-Madaxweynihii hore ee dowlada Puntland Gen.Cadde Muuse Xirsi ayaa maanta duhurkii waxaa uu gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug waxaana ku soo dhaweeyey siyaasiyiin iyo dadweyne kale oo faro badan.
Gen Cadde Muuse Xirsi ayaa waxaa saxaafada kula hadlay Hotel Sugulle markii uu gaaray magaalada Gaalkacyo waxaana uu sheegay in uu magaalada Gaalkacyo u yimid sidii uu uga shaqeyn lahaa isku keenida Mucaaradaka iyo dowlada Puntlad kuwaas oo ku muransan wakhtiga ka dhiman xukuumada Madaxweyne C/raxmaan Faroole.
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen Cadde Muuse ayaa sidoo kale sheegay in uu la kulmi doono Isimada ,waxgaradka,Nabadoonada , Maamulka Gobalka iyo kan Degmada Gaalkacyo iyo siyaasiyeen ka soo horjeeda dowlada Faroole oo ku sugan magaalada Gaalkacyo.
Gen Cadde Muuse ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo amaanka Puntland ayna khilaafka Siyaasiyiinta xukun doonka ah iyo dowlada Puntland aysan saameyn ku yeelan nabadgalyada ka jirtay Puntland .
Madaxweynihii hore ee Puntland Gen.Cadde Muuse Xirsi ayaa socdaal ku soo maray magaalooyinka Boosaaso ,Qardho. iyo Garoowe isaga oo kulamo kala duwan la soo yeeshay masuuliin ka tirsan Puntland waxaana uu Gaalkacyo ku sugnaan doonaa ilaa iyo birito.
Isimo ,Waxgarad.iyo Siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland ayaa haatan wada in la qabto shir weyne ay isigu yimaadaan waxgaradka Puntland si loogu hadlo aayaha Puntland.